Varotra Terpenes | Vidiny tsara indrindra 2022
MILAZA MPANOM-PIRENENA B2B CBD
Varotra Terpenes ambongadiny
Ny terpenes ambongadiny ranoka rehetra dia organika, tsy GMO ary terpenes sakafo. Avy amin'ny loharanon-javamaniry samihafa eran'izao tontolo izao izy ireo. Azonao atao ny mampiasa azy tsirairay mba hahazoana ny tsara indrindra amin'ny terpene tsirairay, na manambatra azy ireo amin'ny fomba samihafa ho an'ny fampandrosoana ny vokatra. Betsaka ny terpenes ambongadiny azo avy amin'ny cannabis.
Misy ambongadiny terpenes Isolates
Cookies ho an'ny Girl Scout
Hazaka Super Lemon
Diesel Super Sour
PROFILES EFFECT TYPICAL TERPENE
Misy ny mety tsy misy farany! Anontanio ny momba ny fandrafetana manokana sy ny mombamomba ny vokatra fanampiny.
FANDRESENA LOKA Madio CANNABIS WONGLESALE TERPENES Amidy Azo atao betsaka sy ambongadiny
Azonao atao izao ny manampy terpenes cannabis tena izy, mora ary ara-dalàna amin'ny famolavolana vokatra! !
Manolotra ny kalitao tsara indrindra izahay, nahazo mari-pankasitrahana, fandrafetana terpene avy amin'ny cannabis ary avy amin'ny zavamaniry. Ny terpenes cannabis rehetra dia avy amin'ny tavy tany am-boalohany ary tsy misy cannabinoids aotra. Ny terpenes voajanahary rehetra dia ahafahan'ny mpanjifa mamorona fomba amam-panao Formula menaka CBD. Ny terpenes azo avy amin'ny zavamaniry dia avy amin'ny zava-maniry hafa ary avy eo atambatra amin'ny mpahay simia aromatika mba hamerenana ny fofon'ny karazana rongony rehetra. Mba hamerenana amin'ny fomba marina kokoa ny tiana tianao indrindra dia ampiana flavonoids organika madiodio mihitsy aza izahay. Ny terpenes avy amin'ny cannabis na avy amin'ny zavamaniry dia azo ampiana amin'ny E-liquid, Tincture, Hemp Oil, CBD manankarena menaka cannabis. Azonao atao ny mividy ny formulas terpene organika amin'ny ambongadiny na amin'ny ampahany amin'ny saika rehetra.
**Mety hiovaova ny fisiany noho ny fahateren'ny famatsiana sy ny fangatahana.
Izahay koa dia mivarotra Terpenes Grade Food Pure, Terpenes Organic, ary Terpenes azo avy amin'ny zavamaniry amin'ny ampahany na ambongadiny. Misy ihany koa ny Pinene sy Camphene. Mety hisy fiovaovan'ny fahafaha-manao noho ny teritery amin'ny fangatahana sy ny famatsiana.
Varotra Terpene azo avy amin'ny Cannabis amidy
Ny fototry ny cannabis dia ny menaka tena ilaina cannabis. Ireo akora simika bio ireo, miaraka amin'ny cannabinoids toa ny THC sy CBD, dia mamorona ny tsirony sy ny fofony ho an'ny karazan-tsakafo rehetra. Terpenes, singa simika lehibe amin'ny menaka tena ilaina amin'ny Cannabis, dia teny malaza malaza amin'ny indostria. Misy karazana biochemika maro hafa ao amin'ny menaka iankinan'ny aina izay manome tsirony, fofona ary vokatra biolojika. Na dia betsaka aza ny fantatra momba ny terpenes, ny fampiasana azy ireo amin'ny fitsaboana sy ny fialam-boly, dia mbola betsaka ny tokony hianarana momba ny fifandraisana simika izay miteraka ny vokatry ny entourage.
Mampiasa terpenes madio, organika, tena izy ary miasa ihany izahay. Manana ny teknolojia fitrandrahana sy fiaraha-miasa tsara indrindra eran'izao tontolo izao izahay mba hamokarana terpenes cannabis avo indrindra sy mahomby indrindra.
Ny Terpenes ambongadintsika dia miavaka - Inona no tsiambaratelo?
Affordable Ny raikipohy terpeney dia anisan'ireo fitrandrahana azo avy amin'ny cannabis sy azo avy amin'ny zavamaniry azo alaina. Izany dia noho ny fomba fitrandrahana, ny sourcing ary ny ekipa formulations.
California & Colorado Sourced - Ny famolavolantsika terpene dia avy amin'ny toekarena Cannabis mandroso indrindra eran'izao tontolo izao, ahafahan'ny fidirana amin'ireo tebiteby tsara indrindra eran'izao tontolo izao.
miovaova Ny fizotry ny fananantsika dia mamorona tebiteby amin'ny alàlan'ny fitrandrahana cannabis manankarena, izay hodinihina avy eo ho an'ny mombamomba ny Terpene fantatra. Ity fanaraha-maso ity dia miantoka fa ny ampahany rehetra amin'ny fitrandrahana cannabis dia tsy miovaova.
mandaitra Nahazo valiny avy amin'ny mpanjifa an'arivony izahay hatreto fa ny vokatray dia manome vokatra fialamboly sy fitsaboana mahomby sy synergistic rehefa atambatra amin'ny CBD sy THC.
Mahafinaritra Maro amin'ireo mombamomba antsika nohatsaraina no manana tsiron-tsakafo sy fofona izay tsy nalaina tamin'ny fomba nentim-paharazana. Ireo vokatra terpene ireo dia ny sasany amin'ny tsirony indrindra.
Pure Ny fitsapana avy amin'ny antoko fahatelo dia manome antoka fa ny mpanjifa dia mahazo antoka fa ny vokatra rehetra dia vita amin'ny akora kalitao. Fomba fanadiovana maro no ampiasaina hanesorana ireo loto na poizina sisa tavela aorian'ny dingan'ny fitrandrahana.
Transparency Mino izahay fa ny mangarahara no fanalahidin'ny vokatra tsara; ny fiadanan-tsaina no tanjonay. Ny ampahany amin'ny vokatray rehetra dia notsapain'ny antoko fahatelo ary manaraka ny fanao tsara indrindra amin'ny indostria. Ny fenitry ny terpeney dia misy THC 0%, tsy misy pestiside na loto mikraoba, ary tsy misy solvents.
Mpitarika voaporofo Ny terpenes dia nahazo mari-pankasitrahana iraisam-pirenena tamin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa manokana amin'ireo marika penina menaka cannabis ambony indrindra. Ny iray amin'ireo mpiara-miombon'antoka aminay dia vao haingana no nomena anarana hoe penina avo lenta THC ambony indrindra any Southern California. Nahazo ny laharana voalohany tamin'ny The Karma Cup any Canada ihany koa izy.
Teknolojia voaporofo Ny terpenes dia novokarina tamin'ny alàlan'ny teknolojia distillation fractional proprietary sy teknika fanadiovana. Ny fanaraha-maso sy ny tsy fitoviana amin'ny vokatra dia azo atao amin'ny alalan'ny fractionation. Mamerina ny mombamomba ny tsiro sy ny fahombiazan'ny karazany fantatra izahay. Amin'ny fitambarany, manana traikefa 30 taona mahery amin'ny fitrandrahana rongony ny ekipanay fitrandrahana.
Ara-tsiansa - Ny fototry ny teknolojiantsika dia ny fahatakarantsika ny biochemistry amin'ny ambaratongan'ny génomika. Ny fiantraikan'ny entourage dia aseho amin'ny alalan'ny fandalinana ny kaody fototarazo amin'ny tebiteby ampiasaina amin'ny vokatray. Amin'ny fitambarany, ny ekipanay dia manana traikefa 40 taona mahery amin'ny biotechnology génomika ary niara-niasa tamin'ireo olo-malaza malaza indrindra amin'izao fotoana izao amin'ny génomika.
Scalability Ny sehatra ara-teknolojianay dia afaka mivelatra amin'ny sehatra indostrialy. Izany dia hamela ny vidim-piainana hidina rehefa miakatra ny fitakiana tsena.
Key Cannabis Wholesale Terpenes
Beta-caryophyllene, sesquiterpene, dia hita amin'ny zavamaniry maro, anisan'izany ny jirofo, dipoavatra mainty, ravina kanelina, jirofo ary basil Thai. Mety ho hita ao anaty lavenona kely ihany koa izy io. Ny fofony dia azo lazaina ho masiaka, poivre, ary/na hazo. Caryophyllene (CB2) no hany terpene fantatra izay mifandray amin'ny rafitra endocannabinoid. Ny fikarohana dia mampiseho fa ny b-caryophyllene dia mampanantena ny drafitra fitsaboana homamiadana. Ny fikarohana dia naneho fa ny b-caryophyllene dia mamatotra ny receptor CB2, ary ny antagonista CB2 miasa. Ankoatr'izay, ny b-caryophyllene dia fantatra ho ligand receptor CB2 miasa izay tsy psychoactive amin'ny sakafo ary ho cannabinoid anti-inflammatory macrocyclic.
Monoterpene Camphene dia mamoaka fofona masiaka avy amin'ny ala mando sy fanjaitra fir. Camphene dia afaka mitana anjara toerana lehibe amin'ny fisorohana ny aretim-po. Ny fitsapana klinika dia naneho fa ny camphene dia mampihena ny haavon'ny kolesterola plasma sy ny triglycerides eo amin'ny voalavo hyperlipidemic. Ity fanadihadiana ity dia manome fahatakarana ny mety hisian'ny camphene ampiasaina amin'ny toeran'ny fanafody fampidinana lipida izay voaporofo fa miteraka fahasimban'ny atiny, olana amin'ny tsinay ary mamaivay. Izany ihany no mendrika hanaovana fanadihadiana.
Varotra Camphene Terpene
Delta-3-carene, monoterpène bicyclic, manana fofona mamy sy mamy. Hita ao amin'ny menaka mahasoa sy mahasalama izy io, toy ny menaka zenevrie, menaka fanjaitra fir, ary menaka kypreso. Delta-3-carene, amin'ny fifantohana ambony kokoa dia mety hiteraka fahaketrahana ny rafi-pitatitra foibe. Ampiasaina izy io mba hanamainana ny tsiranoka amin'ny vatana toy ny hatsembohana, ranomaso ary mucus.
Humulene, fantatra ihany koa amin'ny hoe humulene na a-caryophyllene, dia sesquiterpene izay isomer b-caryophyllene. Humulene dia hita ao amin'ny hops sy cannabis sativa strains ary ny mombamomba terpene ambongadiny hafa. Manome ny labiera ny hanitra hoppy mampiavaka azy ny Humulene. Humulene manana anti-tumor sy anti-bakteria fananana. Mampihena ny fahazotoan-komana koa izy io. Ny Humulene dia ampiasaina miaraka amin'ny b-caryophyllene mba hitsaboana ny areti-maso. Efa ela no nampiasaina tamin'ny fitsaboana sinoa ny humulene. Izy io dia toy ny fanafoanana ny fiankinan-doha ary manampy amin'ny fampihenana ny lanjany.
Linalool, monoterpenoid, dia manana lokon'ny voninkazo sy lavender. Ny Linalool dia monoterpenoid izay mampitony sy mampitony. Ny Linalool dia nampiasaina ho fanampiana torimaso nandritra ny an-jatony taona. Linalool dia mampihena ny tebiteby vokatry ny THC madio. Izany dia mahatonga azy io ho ilaina amin'ny fitsaboana ny fanahiana sy ny psychosis. Ny Linalool dia afaka mampitombo ny hery fiarovana, mampihena ny areti-maso ao amin'ny havokavoka ary mamerina ny fiasan'ny saina sy ny fihetseham-po. Izany dia mahatonga azy io ho ilaina amin'ny fitsaboana ny aretin'i Alzheimer.
Limonene Terpene betsaka
Monoterpenoids toy ny limonene dia singa monoterpenoid izay iray amin'ireo singa roa lehibe vita amin'ny pinene. Ny Limonene dia manana fofona citrus mahery izay mamofona toy ny sokay, voasarimakirana ary voasary. Ny karazany manankarena amin'ny limonene dia mampisondrotra ny toe-po, ny toe-tsaina ary ny toe-po. Ity terpene citrusy ity, izay hita ao amin'ny peppermint, rosemary, juniper, ary juniper, no singa fototra amin'ny hoditry ny voankazo citrus. Hita amin'ny menaka fanjaitra kesika maro koa izy io. Ny inhalation dia fomba tsara hitroka ny Limonene ary miditra haingana any amin'ny lalan-drà. Ny fandinihana klinika dia naneho fa manampy amin'ny fisintonana terpenes hafa amin'ny hoditra sy ny tavy hafa.
Myrcene (indrindra ny b-myrcene) dia monoterpène. Io no terpene mamokatra be indrindra amin'ny cannabis. Ny karazany sasany aza dia misy hatramin'ny 60% amin'ny menaka ilaina. Ny fofony dia voalaza fa raokandro, musky, ary tany - mitovy amin'ny jirofo. Ny haavon'ny myrcene avo lenta amin'ny rongony (matetika mihoatra ny 0.5%) dia miteraka fiantraikany "couchlock" malaza amin'ny karazana rongony mahazatra Indica fanafody. Ny myrcene dia hita ao amin'ny menaka hops sy voankazo citrus, menaka kininina na thyme bibidia ary koa ahitra voasarimakirana, ravina helo-drano, kininina ary toerana maro hafa.
Zavamaniry hafa. Ny Myrcene dia fitambarana fanafody manana toetra manokana ananantsika ambongadiny terpenes. Mampihena ny fanoherana ny sakana amin'ny ati-doha izany. Izany dia mamela azy sy ny simika hafa handalo ny sakana mora kokoa sy haingana kokoa.
Ny Phellandrene dia azo lazaina ho pepperminty misy fofona citrus malefaka. Phellandrene dia manana fananana fanafody manokana. Ny fitsaboana sinoa nentim-paharazana dia nampiasa azy io mba hitsaboana olana amin'ny fandevonan-kanina. Izy io dia iray amin'ireo singa manan-danja indrindra amin'ny menaka turmeric. Ity menaka ity dia ampiasaina amin'ny fitsaboana sy fisorohana ny aretina fungal systemic.
Pinene dia mitovy amin'ny anarany. Manana hanitra miavaka amin'ny kesika, fir ary hanitra hazo hafa izy. Ny pinene dia monoterpène izay tena ilaina ho an'ny biby sy ny zavamaniry. Mihetsika amin'ny zavatra simika izy io mba hamoronana karazana terpenes sy zavatra hafa. Pinene dia ampiasaina ho expectorant, bronchodilator, ary anti-inflammatory amin'ny fitsaboana. Ny fandinihana klinika dia mampiseho fa mety hihena ny fiantraikan'ny THC raha mifangaro amin'ny pinene.
Ny monoterpenoid telo izay mifandray akaiky dia ny terpinen-4, a-Terpineol ary 4-terpineol. Ny fofon'ny terpineol dia nampitahaina tamin'ny felam-boninkazo sy ny lilac. Ny haavon'ny pinene amin'ny cannabis dia afaka manafina ny fofon'ny Terpineol. Terpineol dia fantatra amin'ny fiantraikany mampitony sy mampitony, indrindra fa ny a-terpineol. Manana anti-tazomoka, AChe inhibitor, ary fananana antibiotika izy io.
Terpinolene, singa iray amin'ny rosemary sy sage, dia hita ihany koa amin'ny menaka azo avy amin'ny Monterey Cypress. Ampiasaina amin'ny menaka manitra sy savony izy io. Mandroaka bibikely tsara izy io. Terpinolene dia manana fofona piney miaraka amin'ny nuance felam-boninkazo sy raokandro. Manana tsiro mamy izay mampahatsiahy ny voankazo voasary toy ny voasary sy voasarimakirana. Terpinolene dia fanerena ny rafi-pitatitra foibe izay azo ampiasaina hanentanana torimaso, faharendremana, na fientanentanana ara-tsaina sy tebiteby. Terpinolene koa dia nampihena be ny fanehoana ny proteinina AKT1 ao amin'ny sela K562, ary nanakana ny fitomboan'ny sela tafiditra amin'ny karazana homamiadan'ny olombelona.